Magaalo Soomaaliyeed oo ay ku soobateen dhalinayo abaabulan oo dhac, Kufsi, jirdil iyo dhibaatooyin dheeraad ah ku dhaqaaqaya iyo in badan oo xabsi lagu guray. - jornalizem
Magaalo Soomaaliyeed oo ay ku soobateen dhalinayo abaabulan oo dhac, Kufsi, jirdil iyo dhibaatooyin dheeraad ah ku dhaqaaqaya iyo in badan oo xabsi lagu guray.
Magaaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland ayaa waxaa xilligaan ku soo batay dhalinyaro raxan raxan isu abaabulay oo habeenkii si xad dhaaf ah ugu dhaqaaqa falal waxashnima leh oo isugu jira kufsi boob iyo garaacis ay kula dhaqmayaan dadka arintaas oo walaac dheerad ah ku abuurtay shacabka.
Mid kamid ah haweenka ku dhaqan Hargeysa ayaa tiri, “Habenkii caruur iyo gabdho toona looma dirsan karo magaalada. Gabdhaha waxaa kufsanaya Food dheerayaal abaabulan. Ilamahana lacagaha ayeey ka boobayan. Seefo ayeey wataan da’doodo waxa ay u dhexeysaa food dherayaasha 18-20 sano. Maamulka waxaan ka codsaneynaa in ay wax ka qabtaan”.
Maxmed Maxamuud Cali, Gudoomiyaha magaalada Hargeysa ayaa qiray in ay jiraan dhalinyaradaan abaabulan ee dhibaatada ku haya magaalada isaga oo qoray in Police-ku ay dadaal ku bixiyeen qaabkii ay ku wiiqi lahaayeen kooxdaasi gaangistarada ah iyada oo inbadan oo kamid ah xabsiya lagu guray kuwa kalana baadi goob lagu wado.
Waxa uu ugu baaqay waalidiinta caruurtooda ku tebaya in ay kamid yihiin dhalinyarada falalka amaanka ka dhanka ah magalaada kawada in ay carurutooda si gaar ah ula socdaan oo ay ka reebaan dhibaateynta shacabka.